Tababare Ten Hag Oo Ciyaarahan Cajiib Ah U Soo Wada Man United ,Italy Ayuu Ka Xamaashaa – Kooxda.com
HomePremier LeagueTababare Ten Hag Oo Ciyaarahan Cajiib Ah U Soo Wada Man United ,Italy Ayuu Ka Xamaashaa
May 13, 2022 Osman Fantastic Premier League, Wararka Maanta Comments Off on Tababare Ten Hag Oo Ciyaarahan Cajiib Ah U Soo Wada Man United ,Italy Ayuu Ka Xamaashaa
Tababaraha soo socda ee Manchester United Erik ten Hag ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu la soo saxiixdo daafaca dhexe ee Juventus Matthijs de Ligt inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Red Devils ayaa qorsheyneysa inay ugu yaraan hal daafac dhexe oo cusub kusoo kordhiso suuqa soo socda, iyadoo Phil Jones, Eric Bailly iyo Axel Tuanzebe laga yaabo inay dhamaantood ka tagaan kooxda.
Pau Torres iyo Goncalo Inacio oo u ciyara Villa real iyo Sporting ayaa labadaba si xoogan loola xiriirinayay u dhaqaaqista Old Trafford usbuucyadii dhawaa, laakiin sida laga soo xigtay saxafiga Oriol Domenech, De Ligt ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah kooxdaan 20-ka jeer haysata horyaalka Ingariiska .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Holland ayaa ka soo hoos ciyaaray Ten Hag ee Ajax ka hor inta uusan dhameystirin u dhaqaaqista Juventus 2019, waxaana uu u matalay Marwada Duqda ah 115 jeer tartamada oo dhan.
22-sano jirkaan ayaa xilli ciyaareedkaan muhiim ka ah kooxda Turin, isagoo u saftay 40 kulan tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay seddex gool, islamarkaana caawiye ka ahaa hal gool.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray warar badan oo ku saabsan mustaqbalkiisa bilihii u dambeeyay, iyadoo Juventus loo maleynayo inay u furan tahay inay ku ogolaato inuu ku baxo qiimo sax ah.
De Ligt ayaa labo sano oo kaliya uga harsan tahay qandaraaskiisa haatan uu ku joogo Turin, taasoo la micno ah in Old Lady aysan ku jirin boos adag marka ay timaado mustaqbalka daafaca.
Barcelona iyo Bayern Munich ayaa sidoo kale loo maleynayaa inay isha ku hayaan xaalada, laakiin Man United ayaa la tilmaamay inay rajo ka qabto in xiriirka Ten Hag iyo daafaca dhexe uu kooxda ka caawiyo saxiixiisa.
De Ligt, oo 35 kulan u saftay Netherlands, ayaa 117 kulan u ciyaaray kooxda koowaad ee Ajax ka dib markii uu soo maray nidaamka dhalinyarada ee kooxda.
Man United ayaa sidoo kale si xoogan loola xiriirinayaa da’yarkii hore ee Ajax ee Frenkie de Jong, iyadoo Barcelona ay u furan tahay inay ka iibiso suuqa soo socda.
Jesus Oo Saaxibadiisa Ku War Giliyay Kooxda Uu Ku Biirayo